मृत्यु अघि यतिसम्म डराएका थिए लादेन, श्रीमतीले बयान गरिन् हत्याको रातको पूरै घटनाक्रम - Enepal Serofero
मृत्यु अघि यतिसम्म डराएका थिए लादेन, श्रीमतीले बयान गरिन् हत्याको रातको पूरै घटनाक्रम
एजेन्सी। संसारका सबैभन्दा खतरनाक आतंकवादी मानिएका अल कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेनको आज जन्म दिन । उनको २०११ मे २ तारिखका दिन राति नै हत्या भएको थियो । उनकी पत्नी अमाल बिन लादेनले क्याथी स्कट क्लार्क र एड्रिन लेवीको किताब ‘द एग्जाइल’मा त्यो रातको पूरै घटना बयान गरेकी छिन् । यसका मुख्य अंक बेलायतको चर्चित पत्रिका सन्डे टाइम्सले प्रकाशित गरेको छ । अमालले बताएकी छिन् त्यस रात लादेन कतिसम्म डराएका थिए ।
अमाल लादेनकी चौथी पत्नी हुन् । अमाल त्यतिबेला आफ्ना ६ सन्तानहरुसँग पाकिस्तानको एकटाबादमै थिइन् जतिबेला अमेरिकी सैनिकले लादेनलाई मारेका थिए । त्यो घरमा लादेनकी दोस्री पत्नी खैरिराह, तेस्री पत्नी सेहम र २२ वर्षका छोरा खालिद पनि थिए । लादेनले पहिली पत्नीलाई भने सेप्टेम्बर ११ को अमेरिका आक्रमणको २ दिन अगाडि नै छोडेका थिए । लादेनकी पहिली पत्नीतर्फ ११ सन्तान छन् ।
अमालमा अनुसार १ मे २०११ का दिन उनीहरु खाना खाएर नमाज पढेपछि रातको ११ बजे सुतेका थिए । लादेनका अमालसँगै सुतेका थिए । बिजुली बिग्रिएका कारण सडक पूरै अँध्यारो थियो । त्यो क्षेत्रमा यसरी लाइन जानु सामान्य कुरा थियो । त्यसदिन अमालको निद्रा आधा रातमा खुल्यो । अमालले घरबाहिर र छतमा कसैले हाम्फालेको आवाज सुनिन् । साथमा झ्यालबाहिर उनले दौडिरहेका मानिसको छायाँ देखिन् । यही बीचमा लादेन पनि उठे । उनी निकै डराएका थिए ।
उठेपछि लादेनले आत्तिँदै भने अमेरिकीहरु आउँदैछन् । त्यही बेला यति ठूलो आवाज आयो कि पूरै घर हल्लियो । लादेनका पति पत्नीले एकअर्काको हात समातेर बाल्कनीमा पुगे । तर, अँध्यारो रात भएका कारण केही देखिएन । त्यतिबेला घरको कम्पाउण्डमा अमेरिकी सैनिकको ब्ल्याक हक्स हेलिकप्टर केही पर थिए र घरको कम्पाउण्डमा अमेरिकी नेवी सीलका २४ सैनिक अफिसर आइसकेका थिए । लादेनकी तेस्रो पत्नी सेहम र छोरा खालिदले माथि अर्को तलाको बाल्कनीबाट हेरिरहेका थिए । उनीहरुले थाहा पाएका थिए अमेरिकी सैनिक जवान उनीहरुसम्म पुग्न लागेका छन् ।
लादेनले छोरालाई बोलाए र छोरा खालिदले एके ४७ राइफल उठाए । तर, अमाललाई थाहा थियो खालिदले १३ वर्षको उमेरदेखि गोली चलाएका छैनन् । अमाल र सेहमले विष्फोटको आवाज सुनेर रोइरहेका बच्चाहरुलाई फकाउन थाले । त्यसपछि सबै बच्चाहरुलाई लिएर उनीहरु घरको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा गए । यही बेला फेरि अर्को ठूलो विष्फोटको आवाज आयो । नेवी सीलका अफिसरले घरको मुख्य द्वार विष्फोट गरेर भत्काइसकेका थिए । त्यही बेलामा लादेनले भने ‘उनीहरु मलाई मार्न चाहन्छन् तिमीहरुलाई होइन ।’ उनले आफ्नो परिवारलाई तल जान भनेका थिए ।
त्यसपछि लादेनका ठूला छोरीहरु मरियम र सुमाया बालकनमिै लुकेर बसे, तेस्री पत्नी सेहम र छोरा खालिद तल झरे । अमाल, बिन लादेन र उनीहरुका सानो छोरा हुसैन कोठामै थिए । नेवी सीलका जवान हलसम्म पुगिसकेका थिए । माथि आउनको लागि उनीहरुले विष्फोट गरेर ढोका पनि भत्काइसकेका थिए । फोर्सका एक जवान अरबी बोलिरहेका थिए । उनले खालिदलाई देखेर बोलाए । खालिदले बाल्कनीबाट तल हेर्नासाथ गोली हानेर खालिदलाई मारिदिए । सुमाया र मरियम भाग्ने प्रयास गर्दै थिए ।
सील अफिसर रोबकर्ट ओनील लादेनको कोठामा छिरे । अमाल लादेनको अगाडि उभिएकी थिइन् । त्यही बेला भित्र छिर्दै गरेका सील अफिसरले अमाललाई गोली हाने । अमाल बेडमा ढलिन् र आफ्नो मृत्यु भइसकेको देखाउने प्रयास गरिन् । त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै सीलका जवान भित्र छिरे र लादेनमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउन थाले । यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी लादेनका छोरा हुसेनलाई जवानहरुले समाते र उनको अनुहारमा पानी छ्यापिदिए ।
जवानहरुले मरियम र सुमायालाई समातेर लादेनको मृत शरीरनजिकै लिएर गए र शव चिन्न भने । मरियमले सुरुमा नक्कली नाम बताइन् । तर, सुमायाले उनलाई रोक्दै यिनीहरु पाकिस्तानी नभएकोले साँचो कुरा भन्न पठाइन् । त्यसपछि मरियमले ती मृतक आफ्ना पिता ओसामा बिन लादेन भएको बताइन् । अमालमा अनुसार ११ वर्षकी छोरी साफिया पनि बाल्कनीमा लुकेकी थिइन् । जवानहरुले उनीबाट पनि लादेनको शवको पहिचान गराए । त्यसपछि लादेनकी दोस्री पत्नी खैरीयाहलाई पनि शव पहिचान गर्न लगाए । उनले पनि मृतक लादेन नै भएको बताइन् ।
त्यसपछि अरबी बोल्ने अफिसरले सबैले पहिचान गरेकोले यी लादेन नै भएको बताए । जवानहरुले लादेनको शरीरलाई घिसार्दै तल लिएर गए । छोरा खालिन जमिनमा मृत थिए । आमाले खालिदलाई चुम्न खोजिन् तर सैनिक जवानले उनलाई तानेर पर हटाए । जवानहरुले लादेनको शवलाई हेलिकप्टरमा राखे । यता अमालले आफ्नो छोरा हुसैनलाई अंगालोमा बेरिन् । त्यही बेला उनले अमेरिकी ब्ल्याक हक्स हेलिकप्टर उठेको आवाज सुनिन् । केही मिनेटपछि नै छिमेकीहरुले चिच्याउँदै सोधिरहेका थिए ‘घरमा सबै मरे कि कोही जिउँदै बचेको छ ?’
Prevढाड दुख्ने समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्ता घरेलु उपाय
Nextकतै तपाईलाई यस्ता सँकेत आएर पनि बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ की ? सचेत रहुनुहोस यो लक्षण घरमा लक्ष्मीको वासको हो